'Ndị na -eme mgbanwe: ihe nkiri ahụ' na -alaghachi na ụlọ ihe nkiri maka abalị abụọ iji mee ncheta afọ 2 ya - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Ndị na -eme mgbanwe: ihe nkiri ahụ' na -alaghachi na ụlọ ihe nkiri maka abalị abụọ iji mee ncheta afọ 2 ya.
'Ndị na -eme mgbanwe: ihe nkiri ahụ' na -alaghachi na ụlọ ihe nkiri maka abalị abụọ iji mee ncheta afọ 2 ya.
Autobots, Pụpụ! Mana, nwayọ, anyị nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo
by Trey Hilburn III September 13, 2021 334 echiche
Ọfọn, Nwogharị bụ ebe a iji chetara anyị ọnwụ anyị na na anyị na -aka nka. Ihe ntụgharị: Ihe nkiri na -alaghachi na ụlọ ihe nkiri iji mee ncheta afọ 35 ya maka abalị abụọ pụrụ iche naanị. Ihe omume Fathom shindig na -alaghachi na nnukwu ihuenyo iji gbaa Decepticon butt na ime ka anyị bewe ákwá dị ka anyị bụ obere ụmụaka ọzọ.
Na nchịkọta akụkọ maka Ihe ntụgharị: Ihe nkiri na-aga dị ka nke a:
“Ruo ọtụtụ puku afọ, Autobots nwere obi ike, nke Optimus Prime (Peter Cullen) na -edu, na -alụ ọgụ megide ajọ ihe ọjọọ, nke Megatron (Frank Welker) na -edu. Ka ọgụ dị n'etiti Autobots na Decepticons na -aga n'ihu n'ụwa, ihe iyi egwu ka ukwuu na -ada. Unicron (Orson Welles, Citizen Kane), nnukwu ụwa na -agbanwe agbanwe nke na -eri ihe niile n'ụzọ ya, na -aga Cybertron iji rie Transformers ụwa ma hichapụ Autobots na Decepticons ịdị adị. Naanị olile anya bụ Autobot Matrix of Leadership. Ebe ndị iro ọhụrụ na -achụgharị ha na ihe egwu dị n'akụkụ niile nke ụyọkọ kpakpando ahụ, Autobots na -arụ ọrụ dị oke egwu ịchekwa ụwa ha nke ga -agbanwe ọdịnihu ha ruo mgbe ebighị ebi. ”
Ihe nkiri a dị egwu dịka nwata. Ọ bụkwa ihe na -agbawa obi kpamkpam, ọ nweghịkwa azụmahịa na -emebi ọgbọ ụmụaka niile. Echere m, onye a pụtara na -amagharị ma gosipụta ozugbo na ọ ga -abụ ihe siri ike ma e jiri ya tụnyere ihe nkiri a. Ndị na-emebi ihe, o gburu ndị ogologo oge willy-nilly.
Nwere ike tupu-ịtụ gị tiketi ebe a maka abalị abụọ buru ibu na -ewere ọnọdụ na Septemba 26 na 27. Lelee ndepụta na njikọ iji hụ ma ọ na -egwu na mpaghara gị.
Ị kwara akwa dịka anyị mere n'oge Ihe ntụgharị: Ihe nkiri?